OSINT အမျိုးအစားများ OSINT လို့ဆိုလိုက်​တာနဲ့ အလားကားရနိုင်​သမျှ Resource ​တွေက​နေ ရယူခြင်းဖြစ်​ပါတယ်​.အချက်​အလက်​​တွေကလဲ Online ​သော်​လည်း​ကောင်း Offline ​သော်​လည်း​ကောင်း ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​..Onlineဆိုရင်​ဥပမာအားဖြင့်​ ဘာ​တွေလဲဆိုရင်​ .... Website Blog Social Network Video Share site wiki Whois metadata dark web GIS Television Radio Satellite image အပြင် online က​နေရနိုင်​သမျှ​ အချက်​အလက်​​တွေဖြစ်​ပါတယ်​ Offline ဆိုရင်​ ... Printed Media ​တွေဖြစ်​တဲ့ သတင်းစာ ဂျာနယ်​ စာအုပ်​ မဂ္ဂဇင်း သု​တေသနစာတန်း အစိုးရထုတ်​ပြန်​ချက်​ အလုပ်​​ခေါ်စာကအစ သု​တေသနဂျာနယ်​ metadata ပါတဲ့ video Photo စာ​တွေဖြစ်​ပါတယ် OSINT အသုံးပြုသာ အဖွဲ့အစည်းများ ပြည်ပနိုင်ငံများမှာ​​တော့ အစိုးရပိုင်းက​နေ ဦး​ဆောင်​ပြီးတွင်​ တွင်​ကျယ်​ကျယ်​လုပ်​​ဆောင်​ကြပါတယ်​.ဘာလို့လဲဆိုရင်​ Government ဖြစ်​တာနဲ့ အညီ open Source အပြင်​ အချက်​အလက်​ပိုမိုစုံလင်​​တာ​ကြောင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​.အ​မေရိကန်​ ဆိုရင် ​Open Source Center . အင်္ဂလန်​ဆိုရင်​ BBC Monitoring ဟာ နာမည်​ကြီး အဖွဲ့အစည်​တွေဖြစ်​ပါတယ်. Decision Making ပြုလုပ်​တဲ့အခ
Open Source Intelligence (OSINT) ကိုပြည်​ပနိုင်​ငံ​တွေမှာ​တော့ Law Enforcement အဖွဲ့အစည်း​တွေအပြင်​ စီးပွား​ရေးအရပါ ​ရော သု​တေသနအရပါ ​ဆောင်​ရွက်​ကျပါတယ်​ လူတစ်​​ယောက်​ အဖွဲ့အစည်း​တွေကို စုံစမ်းတာက​နေစလို့ နိုင်​ငံတစ်​နိုင်​ငံရဲ့ ​နေရာဌာန စီးပွား​ရေး လူမှု​ရေး အချက်​အလက်​​တွေကို စုံစမ်းတယ်​ သု​တေသနပြုကြပါတယ်​. အချက်​အလက်​​တွေကို​တော့ Online news ​တွေ Social Network ​တွေကရယူပါတယ်​ အချို့အချက်​အလက်​​တွေကို ​ငွေ​ပေးပြီး ရယူကြပါတယ်​.. ဘယ်​​နေရာ​တွေမှာ အသုံးချလဲဆို​တော့ စီးပွား​ရေးအရလုပ်​တဲ့ OSint အဖွဲ့အစည်​တွေက သက်​ဆိုင်​ ရာအ​ကြောင်းအရာကို ​ငွေ​ပေးပြီး ​ရောင်းချပါတယ်​ အချက်​အလက်​​တွေ​က​နေ သုံးသပ်​ချက်​ပါလိုချင်​ရင်​ အဖွဲ့အစည်းက​နေ ဆိုင်​ရာအပိုင်းလိုက်​ ပညာရှင်​က​နေသုံးသပ်​​ပေးပါတယ်​..ဒါကစီးပွား​ရေးအပိုင်း... တက္ကသိုလ်​​တွေ အစိုးရပိုင်း​တွေကျ​တော့ သူ့နယ်​ပယ်​အလိုက်​ OSINT Team ​တွေဖွဲ့တယ်​ အချက်​အလက်​​တွေကို ရယူတယ်​ ... ရလာတဲ့ အချက်​အလက်​​တွေကို မှနိမမှန်​ မှားမမှား တိုက်​ဆိုင်​စစ်​ ​ဆေးတယ်​ ... ပြီးမှ ဖြစ်​နိုင်​​ချေကို အ​ဖြေထုတ်​တယ်​. အချက်​အလက်​​တွေဘယ်​ကရလဲ
Digital Forensics Part (48) SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)
အီရန် ညူကလီယား Station ကို တိုက်ခိုက်တဲ့ Stuxnet အကြောင်းကိုတော်တော်များများ သိကြမှာပါ။ Stuxnet က computer ကိုအဓီကထားပြီးတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပဲ Stuxnet က Computer ထဲကိုရောက်တာနဲ့ Computer မှ PLC စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိ ၊ မရှိ ကြည့်ပါတယ်။ PLC က Siemens (PLC) စနစ်ဆိုတာနဲ့ Stuxnet ကစတင်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Control စနစ်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ Computer ကနေ Control စနစ်ကို အဓိကထားပြီး တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော Threat တွေလို Threat သက်ရောက်တဲ့ အခါပြသတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေပြသမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Forensics လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ (Supervisory Control and Data Acquisition) မှာအသုံးချနိုင်ပေမဲ့။ PLC လုပ်ငန်းတွေ ချိတ်ဆက်မှုတွေကို နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။PLC စနစ်ကို ကျွမ်းကျင်သူတွေလိုအပ်ပါတယ်။ များသော အားဖြင့် Control system က အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ Social Engineering နည်းကို အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်တာများပါသည်။ Routeable မလုပ်နိုင်တဲ့ Connection ပေါ်ကနေသွားမယ်ဆိုရင် Forensics လုပ်ဖို့ သီးသန့် Device တွေလိုအပ်ပါတယ်။ Security အရ workstation တွေက အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာ နည်းပါးပါတယ်
Window Registery List for window xp to window 10 Over 600 keys DownloadLink> https://drive.google.com/folderview?id=1qg49nB2TuuQxNfylCJp8rkHl7wJjvTlK Credit to DFIR TRAINING
Digital Forensics Part 47 ( OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) နှင့် Digital Forensics)
OPEN SOURCE INTELLIGENCE (OSINT) နှငျ့ Digital Forensics Second War ပြီးတဲ့ အချိန်ကနေစပြီး သတင်းမီဒီယာတွေ TV အစီအစဉ်တွေဟာပိုမိုများပြားလာပြီး ပြောဆိုရေးသာမှု အပိုင်းမှာ ပိုမိုပွင့်လင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် Internet ပေါ်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဟာ ပိုမိုမြန်ဆန်ကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။ ဘယ်နေရာမဆို အဆိုးနဲ့ အကောင်းဒွန့်တွဲနေသလိုပါပဲ။ အခုလိုတိုးတက်လာတဲ့အတွက် ကောင်းကျိုးတွေရှိသလို တစ်ဖက်မှာလဲဆိုးကျိုးတွေက ရှိလာပြန်ပါတယ်။ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှု၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက အင်တာနက်ကို အသုံးပြုကာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ Juniper Research အရဆိုရင် လာမဲ့ 2019 မှာ cybercrime ကြောင့်် ကမ္ဘာနဲ့တစ်ဝှမ်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အစိုးရပိုင်းကနေ ကာကွယ်မှုအတွက် ကုန်ကျငွေ ၂ ဘီလီယံခန့် ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်အစိုးရပိုင်းနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေက ငွေအကုန်ကျသက်သာပြီး တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ အကျိုးရှိစေမဲ့ Open Source Intelligence စနစ်ကို အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Open Source Intelligence (OSINT) စနစ်ဆိုတာ ကမ္ဘာအနှံမှာ Publice ရရှိနိုင်တဲ
Online (active) live system ကိုတော့ incident Response အတွက်သာ အဓိကထားသုံးတာများပါတယ်။ Offline (System Power Off) အနေအထားမှာလဲ Event Log က investigation လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Event Log က Non-Volatile Information ဖြစ်လို့ပါ။ Power Off သွားရင်လဲ Log ကျန်ပါတယ်။ Event log ဟာ Binary Data Base ဖြစ်တဲ့အတွက် .evt .evtx file extension ဖြစ်ပါတယ်။ Event View ကနေကိုယ်လိုအပ်တဲ့ System Log, Application log , Security log စသည့်ဖြင့် တစ်ခုခြင်း ရွေးပြီး save နိုင်ပါတယ်။ save လို့ရမယ့် File extension တွေကတော့ .evtx .cvs .xml .cvs တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင်လို့ရတဲ့ Event View တွေအများကြီးပါ။ အမြင်ရှင်းရှင်းကြည့်လို့ရတာနဲ့ မရတာပဲ ကွာပါတယ်။ Event log file တွေအကုန်ရှိတဲ့နေရာကတော့ C:\_Windows\_System32\_winevt\_Logs ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း MS Window , MS Server မှာနေရာတူပါတယ်။ Registry နေရာကတော့ Computer\_HKEY_LOCAL_MACHINE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_EventLog Event Log ကနေ ရနိုင်မဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ Password အပြောင်းအလဲ Time and Date အပြောင်းအလဲ User logon နဲ့ logout OS start နဲ့ Stop t
Event Log ဟာအရေးကြီးသလာဆိုရင် အမှုမထားရင် အရေးမကြီးဘူး အမှုထားရင်တော့ အသုံးလဲဝင်သလို အရေးလဲကြီးပါတယ်။ MS Operation System တစ်ခုလုံးရဲ့ security ကစလို့ software hardware ရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြနေတဲ့ Log တွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်။Forensics သာမက ရိုးရိုး window user တွေရော MS Server သမားတွေအတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ အသုံးချနိုင်ရင် incident Response အတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ Event Log ကြည့်ပြီးဘာတွေသိနိုင်လဲ ဘယ် User က ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လဲ Remote system တွေကဘာတွေဖြစ်လဲ ဘာတွေကို Access လုပ်သွားလဲ အစရှိသည်ဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။ WS OS အလိုက် MS အလိုက် Version မြင့်လာတာနဲ့အမျှ Event Log file type တွေ file name တွေပြောင်းလာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆို အရင် MS version တွေမှာ file size ကြီးတဲ့အတွက် OS ကို နှေးစေတဲ့အတွက်ပါ။MS OS vista နဲ့ MS Server 2008 မှာစတင်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ Performance မြန်လာရုံတင်မက log တွေလဲ များစွာပါဝင်လာပါတယ်။ MS Server တွေဆိုလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ပါဝင်တဲ့ Log တွေကတော့သူ့အခွဲတွေ အခွဲတွေအလိုက် အများကြီးပါပဲ။ forensics view အရင်ဆိုရင်တော့ case အလိုက်အပြင်ရနိုင်သမျှ Log ​တွေရနိုင်​တာ အ​ကောင်းဆု
Computer or Cyber Forensics ​ခေါင်းစဉ်​တပ်​လိုက်​တာနဲ့ Aplus Network System web application programing database Crypto mobile ကိုအ​ခြေခံထက်​သာ​အောင်​ နားလည်​ရမယ်​ တတ်​ကျွမ်းရမယ်​ ဆိုပြီးထင်​ကျပါတယ်​: တစ်​​ယောက်​ထဲနဲ့ အကုန်​နားလည်​ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး.​. Forensics လုိ Detail ကျတဲ့ ဘာသာရပ်​ဆို ပိုလို့​တောင်​ မဖြစ်​နိုင်​ပါ ကျွန်​​တော်​ဆို Aplus Network, System, Mobile software ပိုင်း ဒီ​လောက်​သာ ရတယ်​ ဒါ​တောင်​ အကုန်​မသိ..မသိခြင်းသည် ရှက်​စရာတစ်​ခုမဟုတ်​ပါ.. ​​လိုက်​လို့လဲဆုံးမှာမဟုတ်​ အသစ်​အသစ်​​တွေက ​နေ့စဉ်​ထွက်​​နေတာ...အခြားနိုင်​ငံ​တွေမှာ​တော့ စီးပွား​ရေးလဲ​ကောင်း အကုန်​လုံးကလဲ E goverment ပိုင်းနဲ့သွား​နေတာဆို​တော့ Team ​တွေ​ရော First Response Team ​တွေ ​ရော ​သေ​သေချာချာရှိတယ်​..Device လဲမျိုးစုံရှိပါတယ်​.. ဒီ​နေရာမှာ တစ်​ခုကွာတာက အာရှနိုင်​ငံ​တော်​​တော်​များများက အ​နောက်​နိုင်​ငံ​တွေက Forensics Tools Hardware ​တွေဝယ်​သုံးရသည်​ ...​ပြောချင်​တာက အ​နောက်​ဘက်​ နိုင်​ငံ​တွေက ဘာလို့ ​Forensics Kits ​တွေ Tools ​တွေ ​ရောင်းနိုင်​တာလဲ ... ဝယ်​ချင်​ရင်​​တောင်​ ဒီအတိုင်းသွာ
What Is Digital Forensics ? Part (44) Wireless Router Access Point Forensics
Wireless Forensics မှာတော့ အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ Bluetooth ကနပွေီးတော့ satellite အထိ အခုဖျောပွမဲ့အကွောငျးအရာကတော့ Wireless Router Access Point Forensics အကွောငျးပါ။ Wireless Device နှငျ့ပတျသတျသညျမြားကို ခှဲခွားခွငျး ကိုယျ သံသယရှိတဲ့သူ ဖမျးဆီးရမဲ့သူက Wireless ကို ဘယျနညျးနဲ့ အသုံးပွုတာလဲ အခုပျေါနတေဲ့ Broad Band အမြိုးအစားမြား အခွား Wireless Service မြား FTTX line မြားမှ Wireless Router နှငျ့ခှဲဝခွေငျး ဆငျ့ပှားပွီးခှဲဝခွေငျး (repeater.point to point , bridge mode , Client mode), hostspot (Teathering) စသညျဖွငျ့ ဘယျလိုအသုံးပွုတာကို ခှဲခွားနိုငျရပါမယျ ။ . Wireless routers Wireless access points Wireless modems Wireless network adapters Repeaters Antennas မှတျတမျးတငျခွငျး အသုံးပွုသူနှငျ့ခြိတျဆကျထားသမြှကို video, Photo တဈခုခုဖွငျ့မှတျတမျးတငျရပါမယျ။ (Adapter , Antenna , Cable ကစ Device အမြိုးအစားအပါအဝငျ) ဘယျလိုခြိတျဆကျအသုံးပွုသညျကို ရှာဖှမှေတျတမျးတငျခွငျး အပျေါမှာပွောခဲ့သလိုပဲ ဘယျနညျးလမျးနဲ့ အငျတာနကျကို အသုံးပွုတာလဲ။ point to point , bridge mo